Taratasin'ny fiara sy ny familiana :: Vaky am-batolampy ny ahiahina kolikoly etsy amin’ny ivon-toerana Ambohidahy • AoRaha
Taratasin’ny fiara sy ny familiana Vaky am-batolampy ny ahiahina kolikoly etsy amin’ny ivon-toerana Ambohidahy
Kolikoly miteraka hosoka. Mpanera telo mpanao taratasy fahazon-dalana hamily na “permis” sandoka no naiditra am-ponja vonjimaika, miaraka amin’ny miaramila iray. Natolotra ny Fitsarana manokana misahana ny koikoly (PAC) teny amin’ny 67Ha, ny sabotsy lasa teo, ireo olona miisa valo ambin’ny folo voarohi- rohy tamin’ny fanaovana kolikoly etsy amin’ny Ivon-toeran’ny fanomezan- daharan’ny fiarakodia sady famoahana fahazoan- dalana mamily ary ny taratasin’ny fiara (Cim) Ambohidahy.
Mpiasan’ny Cim miisa enina ambin’ny folo no voarohirohy amin’ity raharaha ity. Vesatra maha voa- saringotra azy ireo ny fanaovana hosoka sy fanararaotam-pahefana. Ankoatra ireto mpanera ireto dia isan’ireo natolotra ny Fitsarana teny 67Ha , afak’omaly, ihany koa ny lehiben’ny Cim sy ny miaramila iray miasa eny amin’ny Capsat miaraka amin’ny vadiny. “Arahin’ny Fitsarana maso ireo olona tsy naiditra am-ponja vonjimaika, toy ny tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny Cim, ny mpandray vola iray ary ireo olona roa tompon’ny fahazoan-dàlana mamily fiarakodia hosoka”, hoy ny fampitam-baovao avy amin’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco).
Raharaha efa ela
Tamin’ny volana marsa lasa teo no nahazo fitarainana avy amin’ olon-tsy fantatra ny avy ao amin’ny Bianco milaza ny fisian’ny manamboninahitra iray miasa eny amin’ny Capsat sy ny vadiny monina eny Itaosy, voalaza fa manao fahazoan- dalana ara-miaramila mamily fiarakodia hosoka ka havadika fahazoan-dalana mamily fiarakodia biometrika eny amin’ny Cim. Taorian’ny famotorana nataon’ny Bianco no niahiahiana ny fisian’ ny kolikoly, fanamparam-pahefana, fanaovana sy fampiasana hosoka taminy.
Nanambara kosa anefa ny lehiben’ny Cim, Rajaonarison Charli Hyacinthe, omaly, fa “raharaha efa taloha io niantsoan’ny Fitsarana azy io”. “Izay ihany no azoko ambara, satria efa nampiatoana ny fano- mezana fahazoan-dalana hamily fiara”, hoy izy.
Araka ny fantatra, mbola maromaro ireo fitoriana voarain’ny Bianco momba ny raharaha. Tamin’ny taona 2017 dia efa nisy ny fitazonana am-ponja an’ireo mpiasa miisa roa tao amin’ny Cim.